crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Dhageyso: Warbixin la xiriirta dhibaatada caafimaad ee ka dhalata biya-fariisiga xilli-roobaadyada. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka April 11, 2017	0 381 Views
Muqdisho (Himilonews) – Waxa lagu yaqaanno umadaha ku qanca inaysan xal u raadin mushkilad walba oo kusoo noq-noqota ayaa ah waxa aad ku arki karto waddooyinka waaweyn iyo jidadka xaafadaha marka uu roobku da’o.
Mana ahan wax kale waa biya-fariisadka xareedda roobka oo meelaha qaar hakid gelisa isku socod guud ee dadka gaar ahaan jiiraanka oo laga yaabo in laba cid oo iska soo horjeedda aysan helin waddo ay iskugu soo gudbaan.
Nasiib-darrada jirta ayaa ah inaysan bulshadu xal loo mideysan yahay ku raadin dhib laga yaabo inuu kaliya u baahnaa iskaashi. Halka la awoodi karo in lacago la iska ururiyo lagu ekeeyo lakabyada jidka ee sababa biya-fariisadka, layaab ma ahan in marka uu roob da’o aad aragto carra-tuur cid walba ay ku sameysay iriddeeda si biyuhu aanay gudaha ugu soo galin.
Dabcan, xaqiiqdii tani waa wax aad looga murgo. Waxaase kasii murug badan saameynta ka dhalaneysa dhiiqada ama biya-fariisadka. Hadaba Himilo Radio ayaa ogaatay inay jiraan dhibaatooyin ka dhasha xaaladan.
Wariyaheenna Mahad Maxamed Cali ayaa soo ogaaday. Warbixintan ayuuna ku eegayaa dhibaatada caafimaad ee ka dhalata biya-fariisiga xilli-roobaadyada. Waxaana inoogu codeyneysa wariyaheenna Casha Nuur Aadan.
Previous: Sucuudi Carabiya oo dhisaysa Goobo Madadaalo
Next: La kulan: Halgamaaga dhisa Mustaqbalka Carruurta Dan-yarta
Maalinta Caalamiga ah ee U-dulqaadasho la’aanta Gudniinka Fircooniga.
Carruurta Rohingya oo Xeryaha Qaxootiga lagu barayo Qur’anka iyo Axaadiista.